Guddiga Soo nooleynta Dhaqaalaha Bulshada (CERB) - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Kaabayaasha Dhismaha|Guddiga Soo nooleynta Dhaqaalaha Bulshada (CERB)
Guddiga Soo nooleynta Dhaqaalaha Bulshada (CERB) waxaa la sameeyay 1982 si looga jawaabo horumarinta dhaqaalaha maxalliga ah ee bulshada Washington. CERB waxay maalgelin siisaa dawladaha hoose iyo qabaa'ilka ay dawladdu aqoonsan tahay ee kaabayaasha dawladda oo taageera kobcinta ganacsiga gaarka ah iyo ballaadhinta. Mashaariicda u-qalma waxaa ka mid ah biyaha gudaha iyo kuwa warshadaha, biyaha duufaanka, biyaha wasakhda ah, dhismayaasha dadweynaha, isgaarsiinta, iyo tas-hiilaadka dekedda.
CERB waxay ku maalgashatay $ 203 milyan jaaliyadaha gobolka oo dhan. Mashaariicdani waxay dhiirrigeliyeen maalgashiyada gaarka loo leeyahay iyo kuwa maxalliga ah oo lagu darayo illaa $ 29 halkii $ 1 ee laga helo CERB. Waxay abuureen in kabadan 36,600 oo shaqo rasmi ah waxayna abuureen $ 427 milyan oo ah lacagaha kale ee dadweynaha iyo $ 5.8 bilyan oo maalgashi gaar loo leeyahay.
Waa maxay New?
11/18/2021 - Guddiga Dhaqaale Dhaqaale ee Bulshada (CERB) ayaa ansixiyay $843,750 oo ah deymo dulsaar yar ah iyo $2,431,250 deeqaha loogu talagalay horumarinta dhaqaalaha, iyo horumarinta kaabayaasha dadweynaha ee lagu beegsanayo kobaca ganacsiga, shaqo abuurka iyo horumarinta balaadhka ee afar gobol. Akhri wax dheeraad ah…
10 / 21 / 201 – CERB waxay soo dhawaynaysaa Xubinta Guddida cusub Elizabeth Casey, buuxinta Jagada Ex-Officio ee Waaxda Amniga Shaqada. Halkan ka akhriso taariikh nololeedkeeda.
09 / 16 / 2021 - Guddiga dib u soo nooleynta dhaqaalaha bulshada ayaa maanta ansixiyay $ 10,247,000 oo ah amaah dulsaar hoose ah iyo deeqo loogu talagalay horumarinta dhaqaalaha, horumarinta kaabayaasha bulshada, iyo kaabayaasha ballaadhinta miyiga ee 9 degmo. Akhri wax dheeraad ah…
07 / 15 / 2021 - Guddiga dib u soo nooleynta dhaqaalaha bulshada ayaa maanta ansixiyay $ 17,980,867 oo ah amaah dulsaar hoose ah iyo deeqo loogu talagalay horumarinta dhaqaalaha, horumarinta kaabayaasha bulshada, iyo kaabayaasha ballaadhinta miyiga ee 13 degmo. Akhri wax dheeraad ah…
07/06/2021 - CERB waxay soo dhaweyneysaa xubin cusub oo Golaha ka tirsan Janet St Clair, Buuxinta Jago # 8, County rasmiga ah. Halkan ka akhriso taariikh nololeedkeeda.
02/08/2021 - Mahadsanid si ay u Qabiilooyinka ku midoobay Hindida Waqooyi Galbeed taageeradaada CERB! Akhri wax dheeraad ah…
01 / 26 / 2021 - CERB waxay soo dhaweyneysaa xubin cusub oo Golaha ka tirsan Senator Mark Mullet, buuxinta booska Golaha Guurtida Aqlabiyada. Halkan ka akhriso taariikh nololeedkiisa.
01 / 06 / 2021 - CERB waxay soo dhaweyneysaa xubin cusub oo Golaha ka tirsan Kim Roberts buuxinta Jagada # 5, Ganacsi Yaryar, Galbeedka Puget Sound. Halkan ka akhriso taariikh nololeedkeeda.
01 / 06 / 2021 - CERB waxay soo dhaweyneysaa xubin cusub oo Golaha ka tirsan Katie Nelson buuxinta Jagada # 9, Ganacsi Yar, Bariga Wabiga Kolombiya. Halkan ka akhriso taariikh nololeedkeeda.
12 / 28 / 2020 - CERB waxay u siideysay Warbixintooda 2020 Sharci dejinta. Halkan ka akhriso more
12 / 28 / 2020 - CERB waxay u siidaysay Sharci dejinta Warbixintooda 2020 Miyiga Bbandband. Halkan ka akhriso more
12 / 01 / 2020 - CERB waxay soo saartay Aragtidooda Mashruuca 2020. Halkan ka akhriso more
11 / 16 / 2020 - Baro sida ay CERB iyo Guddiga Hawlaha Guud u wadaagaan Washington iyo Broadband. Halkan ka akhriso more
06 / 17 / 2020 - "CERB waxay xoojineysaa bulshooyinka ka fog." Akhriso Maqaalka…
View CERB 101 PowerPoint Soo bandhigid halkan.
Warbixinta Sharci dejinta CERB 2020 (PDF)
Warbixinta Sharci-dejinta ee CERB Miyiga Broadband 2020 (PDF)
Warbixinta Sharci dejinta 2020 Qalabka Maalgelinta Kaabayaasha Dhaqaalaha (LIFT) (PDF)
2017-19 CERB Dib-u-eegis Laba Sannole ah (PDF)
Shirka iyo Xubnaha Xubnaha Guddiga
Kulanka Golaha Sare: 01/20/2022
Tilmaamaha Xarunta Shirka Lacey
Jadwalka Shirka 2021-2023 iyo Taariikhaha Codsiga (PDF)
Kheyraadka Sharci Dejinta ee CERB
SB5175 Barnaamijka Ballaadhinta Miyiga
Codsiga Maalgelinta CERB 1 Pager (PDF)
Mudnaanta Sharci-dejinta CERB 1 Pager (PDF)
Sharci dejinta Miyiga CERB ee Miyiga 1 Pager (PDF)
2021 Mudnaanta Sharci-dejinta CERB PPT (PDF)
Dulmarka Mashruuca CERB 1982-2020 (PDF)
Iskaashiga CERB-PWB (PDF)
Xallinta ATNI ee CERB 21-10 (PDF)
Xallinta ATNI ee CERB 20-46 (PDF)
Sheekooyinka Guusha CERB (Fiidiyowyo)
IACC - Golaha Xiriirinta Caawinta Kaabayaasha Dhaqaalaha
Barnaamijyada Deeqaha iyo Amaah ee loogu talagalay Cabitaanka Mashaariicda Biyaha iyo Qashinka (PDF)
Kaa caawinta inaad Kobciso
Laga soo bilaabo 1982, CERB waxay ka caawisay bulshooyinka koone kasta oo gobolka ka mid ah inay koraan iyadoo sameysay maalgashi istiraatiiji ah si loo dhiirrigeliyo shaqo abuur. Fiiri khariidadeena si aad u aragto tirada mashaariicda iyo doolarka CERB ee ay maalgelisay degmadu.
2019-21: Biennium dib u eegis - CERB Muhiim ah
2018-21: 3 Sano oo Dib-u-eegis ah - Xadka Baadiyaha Miyiga